२०७९ को पुसभित्र सम्पन्न होला त मध्य–भोटेकोशी आयोजना ? - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ २०७९ को पुसभित्र सम्पन्न होला त मध्य–भोटेकोशी आयोजना ?
२०७९ को पुसभित्र सम्पन्न होला त मध्य–भोटेकोशी आयोजना ?
Sindhu Khabar मंगलबार, २०७८ कात्तिक १६ / ०८:४०
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका स्थित चाकुमा निर्माण भईरहेको १०२ मेगावाटको मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना १ वर्ष भित्र सक्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्देशन दिएका छन् ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधिन आयोजना २०७९ पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिईएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माणस्थलको निरीक्षण गरी निर्माण प्रगतिको जानकारी लिदै समयसीमा भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन ।
घिसिङले, ‘निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत बढिरहेको र लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन नसकेको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्न निर्देशन दिए । ‘निर्माणमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर विद्युत प्राधिकरणले आवाश्यक सहजीकरण गर्ने घिसिङले बताए ।
प्रकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेर करिब करिब बन्द अवस्थामा पुगिसकेको आयोजनाको मूख्य सुरुङको बाहेक अन्य संरचनाहरुको निर्माण प्रगति उत्साहजनक देखिएको घिसिङले बताए । टोलीले आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनीहरु र परामर्शदातासँग छलफल गरी २०७९ को पुसभित्र कुनै पनि अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुने गरी एकीकृत तालिका बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
घिसिङसहित आयोजनाको प्रवद्र्धक मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष हरराज न्यौपाने तथा सञ्चालकहरु सहितको टोलीले निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेको थियो ।
निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको समग्र निर्माण ७५ प्रतिशत सकिएको छ । २०७९ पुसभित्र सक्ने लक्ष्य राखी आयोजनाको निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।
आयोजनाको बाँध, बालुवा थिग्य्राउने पोखरीलगायतका मुख्य संरचनाको निर्माण आगामी वर्खा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युतगृह भवन निर्माण आगामी पुसभित्र र ७।२ किलोमिटर सुरुङमध्ये खन्न बाँकी ४१५ मिटर तीन महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
२०७१ साउनमा आएको जुरे पहिरो, २०७२ वैशाखको विनाशकारी महाभूकम्प, २०७२ असोजदेखि करिब साढे पाँच महिना नेपाल भारत सीमा नाकामा भएको अवरोध, २०७३ असारमा भोटेकोसी नदीमा आएको बाढी, गत वर्षको असारमा निर्माणस्थल भोटेकोसी नदी एवं आसपासको क्षेत्रमा आएको बाढी(पहिरोको र कोभिड(१९को महामारीको चपेटामा आयोजना परेको थियो ।
प्राकृतिक विपत्ति र सिभिल एण्ड हाइड्रोमेकानिकल कार्यको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी क्वाङसी हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सनको कमजोर कार्यासम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने तालिका प्रभावित हुँदै आएको आरोप स्थानीयको छ ।
हालसम्म आयोजनाको ७५ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । विद्युतगृह भवन निर्माण आगामी पुसभित्र र सुरुङ तीन महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ७ दशमलव २ किलोमिटर सुरुङमध्ये ४ सय १५ मिटर सुरुङ खन्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
‘यो आयोजना निर्माणको अन्तिम खण्डमा पुगेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक एवं कम्पनीका अध्यक्ष हरराज न्यौपानेले भने– बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्ने एकीकृत तालिका बनाएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
सो अवसरमा, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल शिवाकोटीले ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादनमा सुधार आएकाले अहिलेको गतिमा काम भए तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरे । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले जनशक्ति तथा उपकरणहरु बढाएर तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आयोजनाको लागत बढ्न नदिन सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलको काम इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण ९इपीसी० मोडेलमा चिनियाँ कम्पनी क्वाङ्सीले ठेक्का लिएको थियो । इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फको काम भने एन्ड्रिजले गरिरहेको छ ।
एन्ड्रिजले उपकरणहरु आयोजना स्थलमा ल्याइसकेको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत कर्मचारी सञ्चयकोषसँग ऋण सम्झौता हुँदा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १२ अर्ब २८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ थियो । आयोजनाको अद्यावधिक अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १५ अर्ब ३ करोड २ लाख ९० रुपैयाँ छ । निर्माणाधीन आयोजनाको सुरुको कुल लागतमध्ये ५० प्रतिशत स्वपुँजीबाट र ५० प्रतिशत ऋणबाट जुटाइएको छ ।
कम्पनीको जारी पुँजीको ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीहरुमध्येमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको ३७, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटे, नेपाल अरनिको हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, सिन्धु इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालि र सिन्धु भोटेकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको १\_१ प्रतिशत सेयर छ ।
४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १९ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता कर्मचारीको, १५ प्रतिशत सर्वसाधारणको, १० प्रतिशत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीयको, ३ दशमलव ५ प्रतिशत संस्थापक संगठित संस्थाका कर्मचारीको र १ प्रतिशत ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको रहेको छ । कम्पनीले साधारण सेयर निश्कासन गरी रकम संकलन समेत गरिसकेको छ । कम्पनीका साधारण लगानीकर्ताहरु १० लाख ७५ हजार छन् ।
वार्षिक रूपमा ५४ करोड २२ लाख युनिट विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुनेछ । प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत हिउँद र वर्षायाममा प्रतियुनिट क्रमशः रु ८.४० र ४.८० मा खरिद गर्नेछ । यसबाट कम्पनीलाई वार्षिक २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ ।